क्यान्सर पीडितलाई सहयोग – News Portal
June 4, 2019 epradeshLeaveaComment on क्यान्सर पीडितलाई सहयोग
घोराही, २१ जेठ । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १९ सैघा बोल्दी निवासी क्यानसर पीडित भेषकली रागु मगरलाई डेढ लाख बढी सहयोग गरिएको छ । पीडित मगरलाई १ लाख ५६ हजार ३ सय ६२ रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ ।
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १९ का नेपाली काँग्रेसका इकाई सभापति ज्ञानबहादुर रायमाझीको पहलमा संकलन गरिएको रकम सहयोग गरिएको हो ।
पीडितको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारण उपचारमा सहयोग पु¥याउन सहयोग संकलन गरिएको रायमाझीले जानकारी दिए । यस अभियानमा देशभित्र तथा रोजगारको लागि विदेश गएका नेपालीहरुवाट समेत सहयोग आएको उनको भनाइ रहेको छ ।
‘सानो सहयोगले कसैलाई ठूलो सहयोग मिल्छ भने किन नगर्ने भनेर यस प्रकारको अभियान सञ्चालन गरेको हुँ’ रायमाझीले भने । रागु मगरको आर्थिक अवस्था ज्यादै कमजोर भएकाले सबैमा सहयोग गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।
रागु मगर विगत ६ महिनादेखि क्यान्सर रोगबाट पीडित छन् । उनको हाल चितवन क्यान्सर अस्पतालमा उपचार भईराखेको छ । यसरी सहयोग गर्नेहरुमा चित्र बुढा र धनी बुढा रोल्पाबाट २५ हजार ५ रुपैयाँ, जुद्धबहादुर घर्ती (जगत)
घोराही–६ हजार ५ रुपैयाँ, बमबहादुर खड्काले ५ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ, गोपाल खड्काले ६ हजार ३ सय ५४, चन्द्रबहादुर सुनारले ५ हजार १ सय १६ रुपैयाँ, भोवा खत्रीले ५ हजार १ रुपैयाँ, भेगबहादुर खड्काले ५ हजार ६ रुपैयाँ सहयोग गरेका थिए ।